“Madaxweyne Siilaanyo Waa Hogaamiye Qaran oo Dadka ayaa Doortay” | Raacdo Media
Home Aragtida Dadweynha “Madaxweyne Siilaanyo Waa Hogaamiye Qaran oo Dadka ayaa Doortay”
“Madaxweyne Siilaanyo Waa Hogaamiye Qaran oo Dadka ayaa Doortay”
Siyaasi C/laahi Xaaji Cumar (C/laahi Jawaan), ayaa sheegay in dalka Somaliland la wada leeyahay, isla markaana wixii tabashooyin ah ee jira lagu dhameeyo wada hadal iyo isku tanaasul.
waxaanu soo jeediyay xukuumadda talladda haysa in ay go’aamadda dawliga ah ee ay awooda u leedahay sidooda ugu shaqayso, isla markaana ku dhiiranaato fulintooda qaab cadaalad ah.
C/laahi Jawaan, waxa kale oo uu sheegay in Madaxweyne Siilaanyo ku soo baxay codka shacabka Somaliland, isla markaana loo baahan yahay in umaddu isbarbaar taagto.
isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Madaxweyne Siilaanyo waa Madaxweynihii dadkoo idil kaa doortay waa hogaamiye qaran aamina oo qaranimo iyo umaddnimo ku aamina. Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo SNM ha u aanaynina, Isaaq ha u aanaynina, Habar Jeclo ha u aanaynina, cid kalena ha u aanaynina. Markaa waxaan leeyahy aamina”.
Waxaanu intaasi ku daray “Xukuumadana waxaan leeyahay waar wax la cuskado cadaalada ayaa u wanaagsan ee ku shaqeeya go’aanka dawliga ah ama ku adkaysta oo fuliya oo ku dhiiranaada, waayo kalsoonidda umadda doorashadeeda ayaad ku soo baxdeen” ayuu yidhi C/laahi Jawaan oo hadal ka jeediyay munaasibadii hogaanka cusub ee daladda SONYO ay xilka kula wareegayeen, taasi oo Axadii todobaadkan ka dhacday huteelka Maansoor ee magaaladda Hargaysa.
C/laahi Jawaan, waxa kale oo uu tilmaamay in dalka la wada leeyahay, oo aanay cidna marti ku ahayn. Waxaanu yidhi “Waxaanan leeyahay dalka waa la wada leeyahay, nina nin marti ugama aha, waar kii waxaas aaminsanoow qalbiga ka saar waxaas, waar dalkan yaan nina looga dudin, nin dudayna isaga ayaa liita. Meel ayaan ku wada nool nahay, wax kastoo la kala tirsanayo ha laysku dulqaato oo ha laysku samro.”
Dhinaca kale siyaasi C/laahi Jawaan, waxa uu walaac ka muujiyay dhallinyarada magaalada Hargeysa oo iska horimaadyo dhex maraan, waxaana uu yidhi “Dhallinyaradii xadhiga ayay goosatay, waliba kooxaha ciyaara oo noqday kuwo budhcada oo qoloba qolo la dagaalamaysa, waxaan leeyahay way daxalaysatay maskaxdii dhallinyaradu, waana in wacyigelin loo sameeyo dhallinyarada.”
Previous PostWixii kala qabsaday laba qoraa! W/Q:Mustafe M. Khayre Next PostMaqaal Xiiso badan: Turkigii Dhinac Raac laakiin Somaliland ma kula socotaa?